Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao | Desambra 2021
Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Mpanao Gazety Wellness Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Orinasa, The Checkout Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Vaovao Community, Company Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Moa ve mora voan'ny coronavirus ny olona voan'ny aretina mitaiza?
Mampitandrina ny CDC fa ny olona manana toe-javatra misy ifotony dia mora voan'ny COVID-19, saingy mahatonga azy ireo mora tohina kokoa ve? Mandanjalanja ny manam-pahaizana.
Ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny tiroidanao: Izay tokony ho fantatrao
Misy porofo vitsivitsy fa ny COVID-19 dia mety hiteraka fiovan'ny hormonina vetivety. Ity no tokony ho fantatrao momba ny coronavirus sy ny tiroidan'ny tiroid.
Azoko atao ve ny mivoaka any ivelany rehefa mitokana amin'ny coronavirus?
Raha mieritreritra ianao fa efa tratry ny COVID-19 ianao dia tokony hijanona ao anatiny. Saingy, misy vitsivitsy maningana ny fahazoana rivotra madio raha mitokantokana ianao.
Ahoana no hamantarana raha malefaka, antonony na mafy ny soritr'aretin'ny coronavirus anao
Ny ankamaroan'ny tranga COVID-19 dia ho maivana sy antonony. Ity ny fomba hilazana ny fahasamihafana eo amin'ny hamafin'ny soritr'aretin'ny coronavirus sy ny fotoana iantsoana dokotera.
Soritr'aretin'ny allergy vs. coronavirus: Inona no ananako?
Tonga amin'ny vanim-potoana ity ny tazomoka vanim-potoana - ny fahalalana ny fahasamihafana amin'ny soritr'aretin'ny allergy vs. ny soritr'aretin'ny coronavirus dia zava-dehibe amin'ny fahasalamanao sy ny fiadananao.
Mampitombo ny risika hahazoanao COVID-19 ve ny fifohana sigara?
Tsy tapaka ny valiny, saingy fantatray fa ny fialana amin'ny sigara dia mety hahasoa ny fahasalamanao ihany. Ity no lazain'ny manam-pahaizana momba ny fifohana sigara, vaping ary coronavirus.
Coronavirus vs. ny gripa vs. sery
Raha sendra soritr'aretin'ny otrikaretina ianao dia mety ho tampon'ny saina androany ny COVID-19. Ity ny fomba hilazana ny mahasamihafa ny coronavirus, ny gripa ary ny sery mahazatra.
Inona no hatao raha mieritreritra ianao fa voan'ny coronavirus
Raha mieritreritra ianao fa voan'ny coronavirus, dia mankanesa any amin'ny biraon'ny dokotera avy hatrany no mety ho instinct voalohany anao, fa tokony hanaraka ireo dingana 6 kosa ianao.
COVID-19 vs. SARS: Ianaro ny fahasamihafana
COVID-19 sy SARS dia aretin'ny taovam-pisefoana ateraky ny coronavirus roa samy hafa. Ampitahao ireo soritr'aretina coronavirus, ny hamafiny, ny fifindrany ary ny fitsaboana.
Torolàlana momba ny sakafo vaovao amin'ny fampidirana sakafo alergenika amin'ny ankizy
Sambany, ny andiam-pandin-tsakafo farany momba ny sakafo amerikana ho an'ny Amerikanina dia misy torolàlana momba ny alikaola momba ny zaza sy ny zaza. Ity no tokony ho fantatrao.
Tapitra ve ny fanadio tanana?
Ny sanitizer amin'ny tanana dia lany daty nefa tsy midika izany fa tsy azo antoka. Fantaro raha mbola mandaitra ny fanadio tanana lany daty ary inona avy ireo vokatra tokony hialana.
Inona ny G4 (ary tokony hanahy isika)?
Ny fanadihadiana natao vao tsy ela dia nampipoitra ny ahiahy momba ny virus iray mety hitranga amin'ny areti-mandringana. Na izany aza, tsy tena vaovao ny gripan'ny kisoa G4 ary milaza ny manam-pahaizana fa ambany ny loza ateraky ny areti-mandringana.
Ahoana no ahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana miaro tena amin'ny coronavirus?
Rehefa mikaroka fitarihana avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny lehibeny ireo mpikarakara dia mamaly ny fanontanian'ny mpiasan'ny fahasalamana matetika momba ny COVID-19.
Angano 14 momba ny coronavirus-ary inona no marina
Ny areti-mandoza manerantany dia ampy famoretana nefa tsy misy fampahalalana diso. Ireto ny zava-misy momba ny coronavirus olombelona, ​​ny fomba fiparitahany, ny soritr'aretiny ary ny fitsaboana azy.
Ahoana ny fomba hamerenana indray ny tsiro sy ny fofona aorian'ny coronavirus
Very fofona sy tsiro avy amin'ny aretina coronavirus ve ianao? Misy safidy maromaro, manomboka amin'ny fanofanana fofona ka hatramin'ny fanafody, mba hampiverenana ny sainao.
Inona marina ny areti-mandringana?
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanasokajy ny COVID-19 ho areti-mandringana tamin'ny volana martsa 2020. Ity misy lisitr'ireo pandemika farany teo sy torohevitra momba ny famitana iray.
Betsaka no manao fanazaran-tena lavitra ny fiaraha-monina mba hialana amin'ny fifindran'ny coronavirus. Ahoana anefa raha mila famenenana indray ianao? Andramo ireto serivisy fanaterana farmasia ireto.
an-trano fanafody ho an'ny aretina masirasira amin'ny zaza
tylenol mifandimby sy Advil noho ny fanaintainan'ny olon-dehibe
inona no ataon'ny potasioma ambany amin'ny vatanao?
afaka mandray tylenol sy Advil miaraka ve aho
inona ny mahasamihafa ny tylenol sy ny advil
ny fomba hahazoana rakitsoratra fanefitra ho an'ny oniversite